Monday February 03, 2020 - 19:23:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn cusub oo markale ay ciidamada Mareykanka ka geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe.
Sawir Xasuuq diyaarad Drone ah ay ka geysatay deegaanka Axmed Yare
Wararka ka imaanaya Jilib ayaa sheegaya in xalay fiidkii ay diyaarad dagaal duqeysay guri ay deganaayeen dad shacab ah oo kuyaal bartamaha degmada Jilib, duqeynta oo ay geysatay diyaarad Drone ah oo dowladda Mareykanka leedahay waxay sababtay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in duqeynta ay ku dhimatay gabar 17 sana jir ah oo madaxa looga jiray waxaana ku dhaawacantay gabar kale iyo hooyadii dhashay, isbitaalka degmada Jilib ayaa ladhigay dadka dhaawacmay halkaas ayaana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayaa.
Diyaaradda Mareykanka ayaa dhowr gantaal ku dhufatay guriga waxayna gantaalladaas dhaliyeen khasaara nafeed iyo mid maaliyadeed, dadka deegaanka ayaa ugurmaday qoyska dhibaatadu gaartay waxayna dhaleeceeyeen duqeymaha bahalnimada leh ee ciidanka Mareykanka ay ugeysanayaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay diyaaradaha Mareykanka sidaan oo kale dad shacab ah ugu duqeeyeen duleedka degmada Jilib waxaana xusid mudan in marwalba oo duqeymo dad shacab lagu dilo ay ka dhacaan Jubbooyinka iyo Sh/hoose uu taliska AFRICOM ku faano in ay dileen dagaalyahanno katirsan Al Shabaab.
Jabhadda Tigreega oo si adag udifaacatay gacan ku haynta magaalada Aksum.